घर–घरमा कला: सम्भव छैन र ! - Aksharang
कला–रङ्गमञ्च२०७७ भाद्र ५ शुक्रबार
घर–घरमा कला: सम्भव छैन र !
तीसको अन्तिम दशकतिर सडकनाटक लिएर हामी उपत्यकाका सडक, चोकदेखि मुलुकका गाउँ, सहर र बस्ती–बस्तीका चउर, खेत खलिहान, चौतारी, सडक जताततै पुगिसकेका थियौँ । सडकनाटक शब्द नै नयाँ थियो । क्रमशः जनजनमा पुग्न थालिसकेको थियो । राजधानीमा सीमित नाट्य मञ्चन यसरी व्यापकरूपमा देशैभरि पुगेको इतिहासमै पहिलोपटक होला । हामीलाई लाग्थ्यो नाटकको व्याप्तिका लागि एउटा आन्दोलन, एउटा अभियानको आवश्यकता छ । राजधानीका केही हलमा सीमित नाट्य अभियानलाई व्यापकरूपमा देशैभरि पुर्याउनुपर्छ । नत्र केही दर्शकहरूलाई देखाएर केही पत्रपत्रिकामा तिनको समाचार प्रकाशित गर्नुमै सीमित हुनेछ नेपाली नाटक । हामीलाई त्यस्तै लाग्थ्यो । हामी रङ्गकर्मको व्याप्ति चाहन्छौँ भने तिनको प्रयास जबसम्म हामी रङ्गकर्मी स्वयम् आफैँ लाग्दैनौँ तबसम्म सम्भव छैन । सरकारले गरिदेला वा अरू कसैले गरिदेला अनि उन्नति होला हाम्रो रङ्गकर्म, यस्ता मान्यतामा हामीलाई पटक्कै विश्वाश थिएन । आफ्नो विधाको उन्नतिमा सम्बन्धित सर्जक स्वयम् नलाग्ने हो भने सम्भव छैन । हाम्रो यही मान्यताले हामी नाटक लिएर देशैभरि पुग्यौँ । त्यसको परिणाम आज सबैसामु छ ।
यो प्रसङ्ग किन उठाउँदैछु भने जतिवेला हाम्रो यो अभियानको प्रारम्भिक चरणमै थियो, त्यो समय पञ्चायती राजको उत्कर्षको समय थियो । कला, साहित्य, रङ्गकर्म आदि आ–आफ्नै ढङ्गले विकसित हुँदैथिए । काठमाडौँ आजजस्तो भीडभाडका सहर थिएन । साँच्चि भन्ने हो भने सबै कवि, कलाकार, रङ्ककर्मीहरूबीच एकअर्कामा राम्रो सम्बन्ध थियो । सङ्ख्यामा थोरै भएका कारण पनि हुनसक्छ एकले अर्कालाई नचिन्ने भन्ने थिँदै थिएन । त्यो वेला चित्रकलाका विधामा ।
सिर्जना आर्ट ग्यालरी विश्वज्योति हलछेउमा थियो । प्रायः साँझ कलाकारहरूको भेट गर्ने उपयुक्त थलो थियो त्यो । चित्रकलाका सर्जकहरू मात्र होइन गायक, कवि, रङ्गकर्मी आदि प्रायः सबै प्रतिष्ठितदेखि नयाँ कलाकर्मीहरू समेतको भेट गर्ने थलो बनेको थियो । भित्तामा टाँगिएका लोभलाग्दा चित्रकलाहरू अमूर्तदेखि यथार्थवादीसम्मले नेपाली कलाको समकालीन प्रवृतिलाई परिचय दिइरहेको पाइन्थ्यो । तर त्यहाँ प्रदर्शनीका कला अवलोकन गर्ने दर्शकको उपस्थिति भने ज्यादै न्यून । मलाई लागिरहन्थ्यो यति राम्रा कला हेर्न, किन्न र बहस गर्न किन दर्शकहरू आउँदैनन् ? कलाकार आफैँ चित्र सिर्जना गर्ने, आफैँ हेर्ने अनि आफै दङ्ग पर्ने । कदाचित बिक्री भइहाल्यो भने कलाकारका परिचित वा कसैको सोर्सले ।
एकातिर हामीले मञ्चन गर्ने नाटकमा दर्शकको ओइरोलाग्ने स्थिति अनि अर्कातिर कला प्रदर्शनीमा भने किन दर्शक आउँदैनन् । मभित्र अनेक प्रश्नहरूको द्वन्द्व चलिरहन्थ्यो ।
एक दिन कवि मोहन कोइरालाले भनेको सम्झन्छु–‘खै मैले त केही बुझिनँ ।’ उनको सङ्केत अमूर्त कलातिर थियो । मैले झट्ट भनिहालेँ–‘दाइ, तपाईंलाई पनि त मानिसहरू आरोप लगाउँछन् नि मोहन कोइरालाको कविता बुझिँदैन भनेर । आफू भने अमूर्त कविता लेख्ने अनि अमूर्त कला बुझिँदैन भन्ने ?’ वास्तवमा यो एउटा निकै बहसयोग्य विषय हुनसक्थ्यो । तर यस्ताबहस नेपाली कला र साहित्यबीच कहिल्यै चलेन । एउटा वरिष्ठ कवि कला बुझ्दिनँ भन्छ भने साधारण मानिसको प्रतिक्रिया के होला ! हुनत यो स्थिति अहिले पनि अर्थात् झन्डै ४०–४५ वर्षपछि पनि ज्यूँका त्यूँ छ । जेहोस् त्यो वेला दर्शकको उपस्थिति न्यून हुनुको कारण यो नबुझिने प्रसङ्ग पनि एउटा कारक तत्त्व भने अवश्य थियो । अर्काे कारक भनेको हामी नाट्यकर्मीहरू जसरी दर्शकसामु पुगेर नाटकलाई जनजनमा पुर्याउने जुन सशरीर प्रयत्न गरिरहेका थियौँ, त्यस्तो स्थिति कला विधामा हुन नसकेर त होइन ? मेरो मनमा यस्ता प्रश्नहरू उठिरहन्थे । हुन त कला मेरो विधा होइन । तथापि मलाई लाग्थ्यो– कला,साहित्यका सबै विधा एउटै हुन् । सबै सिर्जनाकै विधा हुन् । त्यही वेला मलाई लागिरहन्थ्यो हरेक सर्जक चाहे साहित्य, कला जुनसुकै विधासँग संलग्न किन नहोस् एकअर्काका कलासाधनाको सम्मान गर्नुपर्छ । तर स्थिति ठीक उल्टो थियो । एउटा चित्रकार कहिल्यै कविता गोष्ठी नजाने । एउटा कवि कहिल्यै कला प्रदर्शनी नजाने, एउटा गायक नाटक हेर्न नजाने, नाट्यकलाकार नृत्य हेर्न नजाने । अर्थात् आफ्नो विधाबाहेक अन्य विधाको चासो नै नराख्ने प्रवृत्ति थियो । आज पनि स्थिति सुध्रिएको देखिँदैन ।
जे होस् त्यो वेलाको प्रसङ्गका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने कलाको स्थिति लगभग त्यस्तै थियो । प्रसङ्ग नेपाली कलाको दर्शक किन न्यून ? मेरो मन मस्तिष्कमा रातोदिन उठिरहने प्रश्न थियो यो । लाग्थ्यो त्यति राम्रा, सुन्दर र उत्कृष्ट कलाहरू त हरेक घरका भित्ताभित्तामा टाङ्नुपर्ने । करोडौँ खर्च गरेर बनाएको घरको भित्तामा केही हजार खर्च गरेर किन कला टाङ्न सक्दैन । यो कसको कमजोरी हो ? के यस विषयमा चर्चा र बहस हुनपर्दैन ? यही कुरा मैले त्यो ग्यालरीमा भेटघाटका क्रममा पटकपटक उठाउँथेँ । तर मैले निराश हुनुपथ्र्यो । जब म भन्थेँ– हाम्रो नाटकझैँ तपाईंहरूको कलाको व्यापकताका लागि तपाईंहरू लाग्नु पर्दैन ? जवाफमा कलाकारहरू भन्थे–‘हामी त्यति सस्तो बन्दैनौँ । कलाको आफ्नै अस्तित्व हुन्छ, सस्तो लोकप्रियता चाहिएन हामीलाई ।’ उनीहरू गर्व साथ भन्थे– ‘हाम्रा कला युरोप, अमेरिकादेखि एसियाका कैयौँ मुलुकका प्रतिष्ठित प्रदर्शनीमा पुगेका छन् ।’ यस्तो जवाफले मलाई ननिको लाग्थ्यो । यस्को अर्थ हाम्रा नाटक गाउँगाउँ, बस्तीबस्ती पुग्नु भनेको के सस्तो लोकप्रियता हो । कलाको तुलनामा हाम्रोे नाटकको अस्तित्व कम हो त ?
आज झन्डै ४५ वर्षपछि फर्केर हेर्छु स्थिति त्यस्तै छ । नेपाली कला खोई त हर नेपालीका घरघर पुग्न सकेको ? काठमाडौँ र अन्य केही सहरकै कुरा गर्ने हो भने करोड माथिका हजारौँ भवन बनेका छन्, तर २०–२५ हजारका कला कुनै घरको भित्तामा टाँगिएको देखिदैन । ती भवन मालिकहरूलाई दोष मात्र दिएर पन्छिन मिल्दैन । वास्तवमा आफ्नो सुन्दर घरमा कुनै सुन्दर समकालीन वा कुनै परम्परागत कला राख्नुपर्छ भन्ने चेतना कतिमा छ त ? घरको सुन्दरता कलाले दिन्छ भन्ने चेतना कतिलाई छ, यो गम्भीर चिन्तन र बहसको विषय हो, तर हामी कलाकर्मीले यसतर्फ ध्यान दिन कहिल्यै चासो देखाएनौँ । आफ्ना सम्पर्कका केही उद्योगपतिले केही थान कला किनेर लगेकै भरमा मख्ख परेर के समग्र नेपाली कलाको उत्थान हुन्छ र ! हो, तुलनात्मकरूपमा पहिलेका तुलनामा कलाको बिक्री बढेको छ । तर यहाँ मैले उठाउन खाजेको प्रसङ्ग केहो भने एक दुई कलाकारका कलाको बिक्री हुनु र समग्र कलाप्रति जनचासो हुनु अलग–अलग कुरा हुन् । कलाकार एवम् कलासमीक्षक मुकेश मल्लको विचारमा कलाप्रति यसरी व्याप्ति नहुनुमा शिक्षामा कला विषय नराखिनु हो । उनी भन्छन्– ‘भानुभक्त, देवकोटा वा कुनै पनि कवि चर्चित कवि जनमानसमा लोकप्रिय हुनुको कारण यिनका बारे प्राथमिक कक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म पढाइन्छ । कलाका विषय न स्कुलमा पढाइन्छ, न कला विषयकै उच्च शिक्षामा । अचम्म त के छ भने कला विषय पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई नै नेपाली अग्रज कलाकारहरूका नामसमेत थाहा हुन्न । कारण उनीहरूले विदेशीकलाकारका बारे त कक्षामा पढ्छन् तर नेपाली कलाका विषय पाठ्यक्रममा नै छैन । अनि कुनै कलाकार यस विषयमा चर्चा, गुनासोपनि गर्दैनन् ।
एक जना अनुज कलाकार आफ्नै अग्रज कलकारका बारेमा अनभिज्ञ हुन्छ भने सर्वसाधारण जनतालाई कला र कलाकारका बारेमा जानकारी नहुनुमा के अचम्म भयो र ! हामीमा जे–जति कमी–कमजोरी छन् ती सबैको दोष केवल सरकारलाई दिन्छौँ र आफू पन्छिन्छौँ । तर आफ्नो विधाको कमजोरी होस् वा उन्नतिका प्रसङ्गमा होस् स्वयम् कलाकर्मी आफैँ अग्रसर नभएसम्म सम्भव छैन भन्ने तथ्यबोध हुनु जरुरी छ । केही कलाकारहरू आफ्ना व्यक्तिगत प्रयासमा अग्रसर छन् । तर यो पर्याप्त छैन । मूल प्रश्न भनेको जबसम्म मुलुक भित्रै व्यापकरूपमा जनजनमा नेपाली कलाको लोकप्रियता बढ्न सक्दैन, तबसम्म हामीले गौरव मान्ने ठाउँ रहने छैन ।फ्रान्सेलीहरू पिकासो पाउनुमा गौरव गर्छन् । त्यस्तै हामीले उत्तम नेपाली पाएकोमा गौरव किन नगर्ने !
कलाको विशेष अस्तित्त्व हुन्छ, सस्तो लोकप्रियता चाहिँदैन भन्नुजत्तिको मूर्खता अरू के होला र ! त्यसो भन्नेहरू केही धनाढ्यहरूका घरघर गएर आफ्नो कला किनिदिन किन अनुनय विनय गर्ने ? प्रश्न– त्यस्ता हातको औँलामा गन्न सकिनेहरू कतिले कला किनेर लगे भन्ने होइन, हर घरघरमा नेपाली कला टाङिने लहर कहिले आऊला भन्ने हो ।
कलाकार, कला समीक्षक तथा कला–प्रतिष्ठानका सदस्य रमेश खनाल भन्छन्– नेपाली कला पाँच छ हजारदेखि दसौँ लाखसम्मका पनि छन् । नेपाली मध्यम वर्गका मानिसहरूले किन्नसक्ने मूल्यका कला छ्यापछ्याप्ती छन् । खनालले भने जस्तो कम मूल्यका कला पाइन्छन् भन्ने कतिलाई थाहा छ ? यहाँनेर के बुझ्नु जरुरी छ भने कम मूल्य राख्दैमा बिक्री हुन्छ भन्ने होइन । कलाको अस्तित्व बुझ्नेहरूका लागि मूल्यले त्यति अर्थ राख्दैन ।
अचेल एउटा सामान्य घरमा परिवारका हरेक सदस्यका हातहातमा हजारौँ मूल्यका मोबाइल हुनेगर्छ । एउटा मोबाइल किन्ने पैसाले एउटा कला किन्न सकिन्छ । मोबाइल जति आवश्यक छ, कला पनि त्यतिकै अनिवार्य छ भन्ने चेतना आउने स्थिति कहिले आउँछ ! यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । हरेकले मेरो घरको एउटा भित्ता कलाका लागि हो भनेर छुट्याउने दिन आउनुपर्छ, कलाप्रतिको चासो हर व्यक्तिमा व्यापकरूपमा आउने स्थितिको सिर्जना हुनैपर्छ । यसका लागि कलाकार स्वयंको प्रयत्नमा व्यापक अभियान अब सुरु हुनैपर्छ । केहीलाई लाग्न सक्छ कला–सर्जकको काम सिर्जना गर्नु हो, प्रचारको काम हाम्रो होइन । सही हो सर्जकको काम सिर्जना गर्ने हो तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, हाम्रो सन्दर्भमा यसो भनेर सर्जकले बसिदिँदा आफ्नो विधाको उन्नतिमा बाधा पुग्दोरहेछ भन्ने त हाम्रै उदाहरण पर्याप्त छ । युरोपको समृद्ध इतिहाससँग तुलना गर्न मिल्दैन । जहाँ पचासौँ वर्षदेखि राजनैतिक अस्थिरता छ । राजनैतिक आन्दोलनले थिलथिलो मुलुक, वर्षैपिच्छे बदलिरहने सरकार आदिका सन्दर्भमा कला–साहित्यको उन्नतिमा सरकार वा अरू कसैले गरिदेला म केवल सिर्जना गरेर बस्छु भन्ने हो भने व्यक्तिको उन्नति त होला तर समग्र कला विधाको स्थिति कसरी उँभो लाग्ला र ! गत वर्ष हल्यान्ड जाँदा रेम्ब्रान्टको कला सङ्ग्रहालय जाने अवसर मिलेको थियो । दर्शकको भीड देख्दा छक्कै परेको थिएँ । पेरिसको लुब्रमा दुई दिनपछि मात्र टिकट पायौँ । दर्शकको लाइन यति लामो थियो, के भन्ने ! त्यहाँको समृद्ध इतिहासमा सयौँ वर्षको सङ्घर्ष छ । हामीसँग तुलना हुन सक्दैन । बल्ल त राजनैतिक स्थिरतातिर मुलुक जान लागेको छ । हाम्रै आन्दोलन र सङ्घर्षले कला–प्रतिष्ठानको स्थापना भएको छ । कतिपय कमी कमी–कमजोरी हुँदाहुँदै पनि कमसेकम प्रतिष्ठानको स्थापना भएको त छ । भविष्य अँध्यारो छैन । तथापि सम्बन्धित विधाका कलाकार स्वयम्, कलाका सङ्घ–संस्था, कला–समूहदेखि कला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानसमेत य प्रति सजग हुनु जरुरी छ । एउटा अभियानको थालनी हुनैपर्छ । त्यो अभियान भनेको घरघरमा कला ।
यसका लागि सबैभन्दा ठूलो योगदान भनेको कलाकारहरूकै हो ।
(मल्ल प्रसिद्ध नाट्यकर्मी हुन् । झन्डै पाँच दशकदेखि नेपाली रङ्गमञ्चमा सक्रिय मल्ल सर्वनाम नाट्य समूहका संस्थापक लेखक–निर्देशक हुन)
जिन्दगी की गति धीमी जरूर हो गई है किन्तु घरों की दीवारें हँसने लगी हैं
औरत दलित है
एक कवि का जाना
एउटा भ्रूण जन्मिदैछ